ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
တရုတ်မှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝ Gasket စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ
1D; တရုတ်မှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝ Gasket စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ, တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS ပစ္စတင်လက်စွပ်1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Gasket စက်ရုံ, ကုန်တင်ထောက်ပံ့ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာProcess ဖော်ပြချက် - 1D အမှတ်တံဆိပ်ဆလင်ဒါလက်ကိုင်စီးရီးသည်အတိုချုပ်သံမဏိမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချမှတ်ခံရသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကောင်းဆုံးအင်ဂျင် Valves Partvests ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။
1D; အရည်အသွေးမြင့်အကောင်းဆုံးအင်ဂျင် Valves Partvests ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်မြင့်မားသောဝင်ပေါက်နှင့်လောင်ကျွမ်းစွမ်းဆောင်ရည်, ကောင်းသောလက်ရာကောင်း, လှပသော outsourcing1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ အကောင်းဆုံးအင်ဂျင် Valves ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း1D အမှတ်တံဆိပ်မီးပွား plug, Japan Ngk, Denso, Spark Plug နည်းပညာနှင့် NTK ကြွေထည်နည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလက်မှတ်ရေးထိုးထားချက်လက်မှတ် ထုတ်ကုန်များသည် Platinum Spark Plug, Iridium Platinum Spark Plug, Iridium Spark Plug, နီကယ် Allow Plug နှင့်အခြားမော်ဒယ်များ။
တရုတ်ထံမှစိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံး 4D33 Piston မစ်ဆူဘီရှီပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူ
1D; တရုတ် မှစ. စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံး 4D33 Piston မစ်ဆူဘီရှီပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူ, Facility& လက်မှတ်များ: တပ်ဆင်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် Bosch ရဲ့ / Siemens စက်တွေME013312 ME016896 များအတွက် Fuso Truck ကားမစ်ဆူဘီရှီ 4D33 ဒီဇယ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများပစ္စတင် 108mm alfinပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်, ဖောက်သည်: ကျနော်တို့ 1D မူအရလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဂျပန်နည်းပညာနှင့်ထိုင်ဝမ်မူလအစ၌ရှိကြ၏။4D33 အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအများကြီးဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျနော်တို့ hte အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျလိုအပျအတိအကျဘာကိုဆက်ကပ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတင်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှ။ အကောင်းဆုံး 4D33 piston MITSUBISHI ပေးသွင်း
အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များထုတ်လုပ်သူများတရုတ်စိတ်ကြိုက် piston - 1D; ONE
1D; အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များထုတ်လုပ်သူများ ONE တရုတ်စိတ်ကြိုက် piston - 1D; ONE, Market က Oriental& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,1D အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီပစ္စတင် undergone အပူကုသမှုရှိပါတယ်။ အပူကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲအင်ဂျင်အတွက်ပစ္စတင်ရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။1D တစ်ခုချင်းစီကိုပစ္စတင်ထုတ်ကုန်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ထိုင်ဝမ် CNC စက်ကိရိယာတခုကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းထုတ်ကုန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်အရွယ်အစားသေချာစေရန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ကုန် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးကိုခံယူပါ, အဲဒီနောက်သက်ဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်ကုသမှုပြုလိမ့်မည်။ပစ္စုပ္ပန်မှာကျနော်တို့ပေးနိုငျမျက်နှာပြင်ကုသနေသောခေါင်းစဉ်: ပစ္စတင်သံဖြူများတွင်လည်းကောင်းပစ္စတင်ဖော့စဖိတ်ပစ္စတင်စကတ်ပုံနှိပ် (အင်္ကျီပုံနှိပ် phosphating ဖြူများတွင်လည်းကောင်း) ။ ဤသုံးပါးမျက်နှာပြင်ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအင်ဂျင်အအေးစတင်စဉ်အတွင်းပစ္စတင်နှင့်ဆလင်ဒါကှနျ့အကြားပွတ်တိုက်အားတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆွဲဆလင်ဒါ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ) ပစ္စတင်ဦးခေါင်း Anode ကုသမှု (anode ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ဒါပစ္စတင်များဝန်ဆောင်မှုအချိန်တိုးမြှင့်ဖို့အဖြစ်, ကာဗွန်ပစ္စတင်ကိုယ်တည်းထဲသို့ထိုးဖောက်မနိုင်နိုင်အောင်အကြောင်း, ပစ္စတင်ဦးခေါငျး၏ခိုင်မာသောတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်)
အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ပေးသွင်းဗြိတိန်ထုတ်လုပ်သူများစက်ရုံစျေးနှုန်း - 1D
1d; ယူကေထုတ်လုပ်သူများစက်ရုံစျေးနှုန်း - 1D, One, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ,ပစ္စတင်လက်စွပ်သည်များသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောချဲ့ထွင်မှုပုံပျက်သောပုံသဏ္ is ာန်နှင့်အတူသတ္တု elastic လက်စွပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စတင်ကွင်းများသည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး - compression ကွင်းများနှင့်ရေနံကွင်းများဖြစ်သည်။ compression လက်စွပ်ကို combusion chamber တွင်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များပေါင်းစပ်ထားသောအရောအနှောများကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေနံလက်စွပ်ကိုဆလင်ဒါမှပိုလျှံသောဆီကိုခြစ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ပေးသွင်းယူကေထုတ်လုပ်သူ
ကောင်းသောအဘိုးနှင့်စက်ရုံစေ့စေ့စပ်စပ်လက်ကားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Con - 1D; ONE
1D; ကောင်းသောအဘိုးနှင့်စက်ရုံစေ့စေ့စပ်စပ် ONE လက်ကားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Con - 1D; ONE, 32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနေ့စဉ် output ကိုစွမ်းရည် 40,000 PCs ပစ္စတင်, 200,000 PCs ပစ္စတင်လက်စွပ်con bearing1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကွန်း bearing စက်ရုံ
ကောင်းသောစျေးနှုန်းပေးသွင်း 1D နှင့်အတူအကောင်းဆုံးလက်ကား Piston 6D16 မှမိတ်ဆက်ခြင်း; ONE
1D; ကောင်းသောစျေးနှုန်းပေးသွင်း 1D နှင့်အတူ ONE မိတ်ဆက်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးလက်ကားမှ Piston 6D16; ONE, Facility& လက်မှတ်များ: တပ်ဆင်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် Bosch ရဲ့ / Siemens စက်တွေpiston စက်မှုဝန်နှင့်အပူဝန်ပြောင်းသမုတ်သောသောမော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်၏ "နှလုံး" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆိုးဆုံးအလုပ်လုပ်အခြေအနေများနှင့်အတူအင်ဂျင်အတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါပစ္စတင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကိုထမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်လှံတံကိုရန်ပစ္စတင် pin ကိုဖြတ်သန်းနေဖြင့်လှည့်ဖို့လက်ကိုင်မောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ကောင်းသောအဘိုးနှင့်လက်ကား Piston 6D16 - 1D မော်တော်ကားပစ္စည်း, LTD ။ ။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ကောင်းသောစျေးနှုန်းပေးသွင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလက်ကား Piston 6D16